Fandraisana ny JIOI 2023: mifanindry tanteraka amin’ny tetikasan’ny fitondrana | NewsMada
Fandraisana ny JIOI 2023: mifanindry tanteraka amin’ny tetikasan’ny fitondrana
Firenena tsy tokony hanana fahasarotana amin’ny fandraisana ny lalaon’ny Nosy amin’ny taona 2023 i Madagasikara, araka ny nambaran’ny filohan’ny Komity iraisam-pirenena ny lalao na ny « Comité International des Jeux » (CIJ), Andriamatoa Antonio Gopal, nandritra ny fitsidihana nataony, omaly. Fitsidihana niarahana tamin’ny Minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena , notarihin’Andriamatoa Minisitra Tinoka Roberto, ny Sekretera Jeneraly, Ralaivao Lovatiako ary ireo mpikambana maro avy amin’ny MJS, teo ihany koa ny filohan’ny Komity olympika malagasy, Randrianasoloniaiko Siteny ary ny mpiandraikitra ny fanatanterahana ny tetikasan’ny filoham-pirenena, Tanamasoandro. Toerana maro no notsidihina nandritra izany, ny kianja an’Alarobia, ny Akademia Nasionaly Ampefiloha, ny lapan’ny fanatanjahantena ary ny kianjaben’ny Mahamasina. Taorian’ny fitsidihana ireo « site » ireo, nisy ihany koa ny fampahafantarana ny mahakasika ilay tetikasan’ny filoham-pirenena sy ny Minisitera, amin’ny fananganana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena, tafiditra ao anatin’ilay vinan’asa Tanamasoandro.
150 tapitrisa dolara, ho an’ny Spaoro
Nanambara ny Minisitra ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto, izay niara-dalana tamin’ny CIJ, hatrany, nandritra ny fitsidihana, omaly, fa efa nanokana tetibola amin’ny fanatsarana sy fananganana ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena, ny fitondrana ary natao vaindohan-draharaha izany. Vola mitentina 150 tapitrisa dolara no natokana hanaovana izany tetikasa izany ary misy ny efa vita, toy ny kianjan’ny barikadimy any Toamasina. Ezahina araka izay tratra kosa ireo tetikasa marobe, indrindra hahafahan’i Madagasikara mandray ny lalaon’ny Nosy 2023, izay nohamafisin’ny Minisitra fa firenena mendrika ny handray izany i Madagasikara. Fotodrafitrasa goavana ny mahakasika ny Tanamasoandro, hoy hatrany Andriamatoa Minisitra.
Tsiahivina, mbola hitohy ho amin’ny anio ny fitsidihana ataon’ny CIJ eto amintsika. Toy ny mahazatra kosa, mandritra ny lanonana famaranana ny andiany faha-10 amin’ny lalaon’ny Nosy, hatao any Maorisy, no hilazana izay firenena handray ny andiany faha-11, amin’ny taona 2023.